Akhriso War-Saxaafadeed: Halka ay Mareyso Dib u heshiisiinta Galmudug & Ahlu sunna - Ceelhuur Online
Home > Wararka Galmudug > Akhriso War-Saxaafadeed: Halka ay Mareyso Dib u heshiisiinta Galmudug & Ahlu sunna
April 29, 2018 April 29, 2018 admin549
Waxaa goordhow soo gaaray warqabadka shabakadda Ceelhuur.com warsaxaafadeed uu soo saaray Madaxweyne ku xigeenka Galmudug Maxamed Xaashi Cabdi, Warasaxaafadeedkan ayaa u qornaa sidan:
Ujeedo: Warbixin halka ay marayso Dib-U-Heshiisiinta Galmudug iyo Ahlu-Sunna Waljameeca.
Sida aad la socotaan laga bilaabo bishii Deseember 2017,waxaa socday ka fulinta Heshiiskii Jabuuti ay ku soo wada gaareen Madaxda Dowlad Goboleedka Galmudug iyo Ahal-Sunna. Heshiiskaas oo ahaa runtii guul ay Galmudug gaartay.
Balse waxaa jiray habraacii heshiiskii Jabuuti oo ka koobnaa 14 qodab sidii loo dhaqan galiyay iyo habkii loo maray in dad badan oo reer galmudug ah ay cabasho ka muujiyeen sida aad idaacadahaba ka aragteen ayagoo ay ka hadleen odayaasha dhaqanka ee Cadaado,Gaalkacyo,Caabudwaaq,Ceeldheer, Balanbale iyo Xeraale, ayagoo ka cabanayay ama sheegayay inay aysan aqbalayn in lagu xadgudbo awood qaybsigii ay ku dhisneyd Galmudug ee horay loogu heshiiyay xiligii dhismihii Galmudug, kaas oo uu gundhig u ahaa tirada xildhibaanada ee 89 mudane inay aqbalayn tiro ka badan in la sameeyo tirada xildhibaanada Galmudug.
Waxaa sidoo kale cabasho nooga timid dhamaan qeybaha kale duwan ee shacabwaynaha reer Galmudug sida;
Xildhibaanada Federaalka oo ka soo jeeda Galmudug
Wax garadka reer Galmudug
Xubnaha Aqalka Sare ee ka soo jeeda Galmudug
Wasiirada federaalka ee ka soo jeeda Galmudug.
Hadaba markaan dhageysanay aragtida ka imaaneysa qeybaha bulshada iyo cabashada dadka reer Galmudug ayaa waxaa wada hadal u bilowday Madaxda Galmudug kuwaas oo kale ah;
Wada hadaladaas ayaa looga gol lahaa sidii loo qancin lahaa dadka reer Galmudug, loona siin lahaa tixgalin cabashadooda. Wada hadalkaas ayaa socday mudo dhan 10 casho ah oo ay goobjoog ka ahaayeen;
Dowlada Federaalka ee Soomaaliya
Beesha Caalamka gaar ahaan Urur Goboleedka IGAD oo horey u daadihinayey heshiiskii hore ee Jabuuti.
Kadib wada hadaladaas waxay madaxdii Galmudug iyo korjoogtadiiba isla go’aamiyeen in la sameeyo arimahaan;
In dib loogu noqdo Heshiiskii Jabuuti oo 14 ka qodob ahaa asagana lagu dul shaqeeyo
In sida heshiiskaas dhigayay qodobkiisa 4aad in labada baarlamaan laysku daro ,lana ilaaliyo awood qaybsiga beelaha. Taas oo aan lagu dari karin tiro kabadan 89 mudane.
In dhamaan qodabada dhiman ee heshiiska laga shaqo galo marka la dhamaystiro Dastuurka,Isku dhafka ciidamada,magacaabidda wasiirada, taliyayaasha iyo gudoomiyaha maxakamadda sare.
In madaxda Ahlu-Suna loo yeero si sax ahna looga wada hadlo habka loo dhamaystirayo
Hadaba waxaan rabaa inaan la wadaago bulshada reer Galmudug halka ay wax marayaan oo ah inaan ku heshiiney qodobada kor ku xusan. Waxaan rajeynaynaa inaan heyno jidkii saxda ahaa ee dhismaha Galmudug.
Allah ha nagu ilaaliyo.
Madaxweyne Ku Xigeenka Galmudug
Madaxtooyada Galmudug, Dhusamareeb